_ काठको किताब। पछिल्लो आश्चर्यचकित नॉर्डिक बेस्टसेलर | वर्तमान साहित्य
काठको किताब। यसैले, कुनै पनि अधिक फलफूल वा रहस्य बिना। उपशीर्षक ज wood्गलमा जीवन यो पनि कपटी छैन। लेखक, अज्ञात नर्वेली लेखक (अहिले सम्म) नाम दिए लार्स मिटिंग, काठमा वा यो भन्दा काठ काट्ने कलामा सम्पूर्ण ग्रन्थलाई यस ग्रन्थले स्वाइप गर्दछ। यो हुन सक्छ अधिक साहसी र मूल जब एक विचार मा दांव छ कि बाहिर खडा र प्रकाशन बजार खाने?
हुनसक्छ नॉर्डिक साहित्यका केही ठूला नामहरू १ t .1968 मा जन्मेका पत्रकार माइटिंगको मुटुमा हिर्काउँदा स्तब्ध हुनुपर्दछ (वा छैन), जसले पहिले नै तीन उपन्यास लेखेका थिए। प्रकृतिमा सरल जीवनको लागि यो निर्देशन म्यानुअल र गीत पहिले नै सम्पूर्ण विश्व मा बेचिएको छ आधा मिलियन प्रतिलिपिहरू र अनुवाद गरिएको छ १,16०० भाषाहरू। हामी यो बेच्ने घटनाको विश्लेषण गर्छौं।
यदि म त्यस्तो भावनाको बारेमा एउटा पुस्तक लेख्छु जसमा काठको किताबले उनीहरूको चासो र महत्वाकांक्षालाई बताउँछ, तर यो म जस्तो शहरीको अहंकारको दर्शन जस्तो देखिंदैन, तर मेरो छिमेकीले पढ्न चाहान्ला?
त्यो एक दिन लार्स मिट्टिंगले भनेका थिए (फाभाang्ग, १ 1968 XNUMX) र उनी त्यहाँ पुगे। नतिजा, काठको किताब, एउटा असामान्य (कम्तिमा) काठ काट्ने कलामा ग्रन्थ, रूखहरू र ती विभिन्न प्रकारका काठका बारे निर्देशन म्यानुअल र सल्लाह। तर पनि एक ग्रन्थ मा अस्तित्व वृत्ति मा ध्यान र जंगल मा जीवन को प्रशंसा। र ऊ ध्यान आकर्षित गर्नमा सफल भयो।
यसको बजार प्रक्षेपणमा अप्रत्याशित बिक्री सफलताले यसलाई बनायो एक आन्दोलन को संदर्भ शीर्षक जुन बढ्दो क्रममा छ: प्रकृतिमा फर्काउने मानक बोक्नेहरू मध्ये एक, तथाकथित "शान्त जीवन" लाई। यसैले, विषयको धेरै geeks यसको पृष्ठहरु खोल्छ र लगभग जंगल, पृथ्वी, घाँस र रूखहरु को गन्ध गर्न सक्छ। र त्यो दाउराको त्यस्तो विशेष हो कि उनीहरूले भर्खरको जोसिला र पुनरुत्थानकारी प्रयासमा उनीहरूको अत्यन्तै कुशल कुल्हावरले काटिदिएका छन्।
1 काठ, रूखहरू, वन, शान्ति ...
2 Thoreau को प्रतिध्वनि
3 अकल्पनीय सफलता?
काठ, रूखहरू, वन, शान्ति ...
यस्तो सरल, सरल र शान्त कथा केवल जन्मिएको, हुर्काउने र हुर्काउने व्यक्तिको लागि राम्रोसँग भन्न सकिन्छ जुन प्राकृतिक संसाधनले भरिएको कुनै पनि देशमा उनीहरूलाई सधै रहिरहने चिसोसँग लड्नको लागि हो।
ती उत्तरी भागहरूमा जाडो सधैं त्यो आउदैछ। र उनीहरूको इन्धन काठको उपभोगमा एक इओटा घटेको छैन, नर्वेजियन तेलको अभाव नभए पनि। तर तिनीहरू खान को लागी, केवल त्यहाँ, प्रति परिवार को बारे मा 300 किलो। त्यो काठको आधा भाग काटिएको छ प्रत्यक्ष उनीहरू। त्यहाँ बाट आए विचार Mytting गर्न।
एक दिन उसले एक देखे वृद्ध र बिरामी छिमेकी जो हरेक बिहान बाहिर दाउरा हेर्न जान्छन् जुन अझै पनि त्यो जाडो को लागी सुक्नु थियो। Mytting यो एक भविष्य को लागी एक संस्कार जस्तो देखिन्थ्यो आफ्नो छिमेकी अब देख्न छैन। र मलाई लाग्छ प्रामाणिक र साधारण को नुकसान को रूप मा काठ संग मानिस को सम्बन्ध को रूपक यस समयमा immediacy र प्रविधि द्वारा चिह्नित।
मिटिting आफैंको लागि काम गर्न दाबी गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई त्यो काठको छालामा छिर्न आमन्त्रित गर्दछ जसले पुर्खाको साथ आमनेसामने व्यवहार गर्दछ जुन काठलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले हामीलाई आगो र यसको शक्तिलाई कसरी दर्साउँछ हजारौं अर्थहरू जस्तै तातो वा सान्त्वनाको साथ।
Thoreau को प्रतिध्वनि
माइटिंगलाई XIX को क्लासिकसँग तुलना गरिएको छ, हेनरी डेभिड थोरौ। अमेरिकी कवि, दार्शनिक, निबन्धकार र प्रकृतिवादीले आफ्नो जीवनमा दुई वर्ष प्रकृतिमा आफ्नो जीवन चित्रण गरे Walden। तर पक्कै पनि, तपाईंले समय, विचार र परिदृश्यहरूको दूरीहरू पुल गर्नुपर्नेछ।
स्पष्ट छैन. सबै स्वाद र संवेदनशीलताका लागि पाठकहरू छन्। यदि तपाईं आशाविहीन शहरी हुनुहुन्छ र श noise्काको दुर्व्यसन हुनुहुन्छ भने, तपाईं यस पुस्तकतिर आकर्षित हुन सक्नुहुन्न। तर फुर्सतको वेग र प्रकृतिसँगको मिलनप्रेमीहरूले यसलाई अकथनीय रमाइलोको साथ उपभोग गरिरहेका छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » _ काठको किताब। पछिल्लो आश्चर्यजनक नॉर्डिक बेस्टसेलर
सोल दिन Aguirre द्वारा हप्ता को दिन छैन।
Writers 65 लेखकहरूले डोनाल्ड ट्रम्पको बिरूद्ध एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गरे